Kismaayo News » Is Hortaagga Raysul-wasaaraha ee Hiigsiga 2016
Is Hortaagga Raysul-wasaaraha ee Hiigsiga 2016
Kn: Waxaan maqalnaa Raysul-wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabduwali Sheekh, oo dhahaaya waxaan u taagnahay ama aan difaacayaa sidoo loo suura-galin lahaa higsiga 2016-ka, haddana waxaad maqashaa isaga oo si kale u dhigaya oo dhahaya, khilaafka waxuu dhibaato ku yahay xaqiijinta Higsiga 2016-ka.
Waxaa isweydiin mudan, Yaa Khilaafka keenay? Yaase caqabad ku ah gaarsiinta Higsiga 2016-da? Illaa labadaa waydiimood si sax looga jawaabo waxaa adkaaneysa in si hagaagsan loo qiimeeyo isdiiddanaanta ka dhex-jirta madaxweynaha iyo Raysul-wasaaraha, waxeyna iska noqonayaan go’aammada kuwa siyaasadeysan oo aan ku saleysneyn waxa loo sheegayo shacabka iyo warbaahinta, halkaana waxaa ka jirta khayaano iyo qarin xog ay xaq u lahaayeen waddaniyiinta Soomaaliyeed.
Is-maandhaafka MW iyo RW
Waxaa hubaal ah in laga billaabo maalintii la doortay illaa manta aynu joogno uu RW shaqeeynayay sidii qof kaligii taliye ah, oo waxii ku soo dhaco iska sameeyo.
1-Doorashadii xukuumadda, RW waxuu qalinka ku tiray dad badan oo taageero ka haaystay beeshooda iyo xildhibaannada, waxuuna ku baddeley kuwo ay isagu xidid yahiin ama qaraabo yahiin.
2-Intaa kuma ekaane, RW waxuu fara-galin kula dhaqaaqey awooddii MW ee aheyd inuu yahay taliyaha ciidanka Soomaaliyeed, waxuuna si bareer ah RW- si lawada ogyahaybe- ku magaabay hal dekreeto seddex taliye oo ciidanka qaranka ah, Taliyaha Nabad sugidda, Taliyaha Booliska, waxuuna sidoo kale, wada-tashi la’aan magacaabay Wasiirka Aminiga qaranka. Waxaa ugu danbeysay magacaabista Taliyaha Ciidanka Boliska, kadib geeridii Taliye Maxamed Xasan, oo isga oo aan la duugin uu booskiisii si ku meel-gaar ah ugu magacaabay ku-xigeenkiisii. Labo arrinba, tallaabadaa waxey ahyed, mid ka sii foolxun kuwii hore, waa mide, dhaqanka Soomaaliyeed iyo kan dunida kuma jirto, in meydkii oo yaalla booskiisii lala wareego, waa midda labaade; ma jirin baahi magacoow, oo qofka ku xigeenka ah, ayaa qaanuun ahaan sii wadaya hawsha. Waxaase intaa oo dhan ka muhiimsan, in RW wasaaraha ku sii socday waddadii xayuubsiga awoodda madaxweynaha, oo aan xitaa la xurmeyn meydka, oo ay isaga gaar ahaan qaraabo ahaayeen.
3-Waxuu casilay wasiir kamid ah kuwa ugu muhiimsan uguna hawl-karsanaa wasiirrada, isaga oo u bar-tilmaameedsaday inuu yahay dadka laga badan yahay, oo uusan laheyn xildhibaanno ku filan inay handadaan, waxuuna reebtay kuwa badan oo aysan is jecleyn isaga oo ka cabsaday. Waa tallaabo akhlaaq ahaan iyo damiir ahaanba aad u liidata. Go’aanka oo ahaa mid uu Isbaaro ugu dhiganayo wasiir ku joogay tubta Higsiga 2016-ka, amaan bandanna uga muteystay arrintaa Beesha Caalamka, Dowladda iyo Muwaadiniinta Soomaaliyeedba.
Qofwalba oo si fiican u eega arrimaha Soomaaliya waxuu helayaa, in RW uu caqabad isaga ku yahay gaarista Higsiga 2016-ka, sababaha marag ma doontada ah ee hoos ku xusan aawadeed:
1-Waxuu RW si bareer ah uga soo horjeestay shirkii Jubbooyinka ee Kismaayo, isaga oo ka garab guray midkale oo ka dhacaya Garbahaarreey.
2-Waxuu Puntland ku soo saxiixay heshiis, ka hor imaanaya kii lagu gaaray madaxtooyada, ee uu qeybta ka ahaa, ee loogu dhisayey Mudug iyo Galgaduud, hal maamul. RW wuu baxay, waxuuna Garawe ku soo saxiixay in magaadala Gaalkacyo khad la kala dhex-dhigo oo la kala jaro. Arrintaa o ka hor-imaaneysa heshiiskii loo dhammaa, ee kal hore, kana digeysa maamul u sameynta gobollada mid ku saleysan qabiillo, halkii uu Dastuurka ka sheegayay in lagu saleynayo gobolladii 18-ka ee dalka ka jiray xilligii Dowladdii hore ee Kacaanka. Tani ayaa ah mid caqabad weyn ku ah wada-jirka umadda Soomaaliyeed iyo mustaqbal wanaagsan ee midnimo Soomaali. Waxaa soo ifbaxday dodo cusub oo dhahaya, haddii qabiillada Daarood ay is kala weyn yahiin in tiro yar oo kamid ah ay maamul la dhistaan qabiil kale oo ka badan, taa soo micnaheeda ma noqoneyso in dib loogu laabto maamul u smeynta gobollada oo dhan, Jubba iyo Koonfur Galbeed, oo labadaba ay ku noolyahiin dad aanan aheyn qabiillada talada haya?
3-Waxaa ugu danbeeyey; go’aamadiisa qar-iska tuurka ah, kuna caqabadeynayo Higsiga 2016-ka, isku daygiisii joojinta shirkii maamul u sameynta Koofur Galbeed, isaga oo ka soo saarey waraaqo is burinaya, oo ku fadqalaleynaa shirka. Taana waxey ka hor-imaaneysaa shaqadii dowladda loo igmaday ee aheyd iney fududeeyaan maamul gobaleedyada sameyntooda.
Maqaalkaan waxuu tooshka ku daarayaa oo kaliya is-burinta farriinta RW ee ah inuu u taagnaa gaarsiinta Higsiga 2016-ka isaga oo dhanka kalena Garweyn u haasyta burburinta isku day kasta oo loo qaado hawshaas.
Daahir Xuseen Axmed